Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » China - Tajikistan Tourism: Ndị isi oche kwenyere ịkwalite imekọ ihe ọnụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ Tajikistan • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Njem njem bụ ihe a na-ekwu mgbe Onye isi ala Tajikistan Emomali Rahmon na Onye isi ala China Xi Jinping nwere mkparịta ụka na Satọdee, na-ekwenye ime ka mmekọrịta mba abụọ ahụ mikwuo njọ maka mmepe na ọganiihu.
O kwere nkwa na China ga-enyere Tajikistan aka ịkwalite mmezi ọrụ ugbo, na-ekere òkè na iwu nke mpaghara Tajikistan nke mpaghara akụ na ụba na-akwụghị ụgwọ, ma nweekwu mgbanwe na ọdịbendị, agụmakwụkwọ na njem.
Ndị isi ala abụọ ahụ toro njikọta na imekọ ihe ọnụ na China na Tajikistan n'ọtụtụ ebe, na ọnụ gosipụtara ụkpụrụ ọhụrụ maka mmepe mmekọrịta mba abụọ.
Ha kwekọrịtara itinye mba ha aka ịzụlite ọbụbụenyi niile oge niile, ma kwalite iwulite obodo nwere ọdịnihu ga-adịrị mmadụ.
Xi kelere Tajikistan maka ijigide nzuko nke ise nke Nzukọ na Mmekọrịta na Nkwenye na Asia (CICA), na-ekwu na nkwenye na nsonaazụ emere na ihe omume ahụ na-ezipụ ozi dị mma ma tinye ike dị mma na ụwa.
O kwere nkwa ịkwado nkwado site na China ruo Tajikistan, nke na-ejide CICA ugbu a, iji bulie ọkwa nke mmekọrịta CICA.
Mmekọrịta China-Tajikistan anọgidewo na-enwe ezigbo nkwalite mmepe kemgbe mba abụọ ahụ guzobere njikọ mba ọzọ afọ iri abụọ na asaa gara aga, Xi kwuru, na-ekwu na ha abụrụla ezigbo ndị agbata obi, ndị enyi na ndị mmekọ yana mmekọrịta mba abụọ kacha mma na akụkọ ntolite.
China nwere obi ụtọ ịhụ Tajikistan kwụsiri ike, na-emepe emepe ma nwee ọganihu, ma na-akwado mba ahụ n'ịgbaso ụzọ mmepe nke kwekọrọ na ọnọdụ nke obodo ya, ma na-akwado mbọ ya n'ichebe ọbụbụeze mba na nchekwa, Xi kwuru.
China choro iwusi nmekorita nke mmekorita nke mba na mpaghara Tajik, ime ka onu ogugu nke mmekorita di na mpaghara di iche iche ma jikota ndi obodo China-Tajikistan na ndi nchekwa.
Xi gbara ndị abụọ ahụ ume ka ha nọgide na-akwado ibe ha n'ụzọ siri ike n'ihe gbasara ọdịmma ha. O kwuru na Tajikistan na-akwado ma na-esonye na iwu njikọ nke Belt na Road, na mmekorita nke mba abụọ a na-arụpụta ihe.
Ọ gwara ndị abụọ ka ha mekwuo mmekọrịta Belt na Road Initiative na atụmatụ mmepe mba Tajikistan, tụlee ikike ha ma bulie ogo nke imekọ ihe ọnụ, ma mee ka njikọta ha sie ike na njikọta, ike, ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ.
Uzo abuo kwesiri ime ka mmekorita di omimi na agha megide “ike ato” nke iyi ọha egwu, nkewa nkewa na ime ngosiputa ya na mmeko a hapuru na mba uwa, na njide narcotics na cyber nche, ichekwa obodo na nchekwa ya na udo.
Rahmon ji obi ụtọ nabata Xi maka ileta Tajikistan ọzọ, kelere China maka ụtụ ya maka ihe ịga nke ọma nke nzukọ CICA nke ise. Ọ nabatara ekele nke afọ 70 nke ntọala nke Ndị mmadụ Republic of China, wee chọọ China ka udo na nkwụsi ike ruo mgbe ebighị ebi.
N'ịchọpụta na akụkụ Tajik na-elekwuwanye mmekọrịta mmekọrịta ya na China anya otu n'ime ihe ndị dị mkpa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Rahmon kelere ndị China maka nkwado na enyemaka ya ogologo oge.
O gosiputara njikere iji kwalite mmekorita nke mba abuo na oru di iche iche dika ike, ihe ndi ozo, ike mmiri na ihe ndi ozo n'ime usoro Belt na Road, iji nyere Tajikistan aka imata ebumnuche nke ulo oru ya. Ọ kpọkwara oku n'akụkụ abụọ ahụ ka ha kwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mpaghara dịka ntorobịa, agụmakwụkwọ na omenaala.
Tajikistan gbadoro ụkwụ na-arụ ọrụ na China na-alụso “ike atọ” nke iyi ọha egwu, nkewa na ịkpa oke oke, na mpụ mpụ mba, ime ka ndị mmanye iwu na nkwado nchekwa, na ịbawanye nhazi na ihe omume dị iche iche n’ime otu nzukọ Shanghai (SCO), CICA na usoro ndị ọzọ, dị ka Rahmon si kwuo.
Mgbe ha kwuchara okwu, ndị isi ala abụọ ahụ gara emume iji gosipụta ụdị owuwu nke ụlọ omeiwu China na ụlọ ọrụ gọọmentị. E nyekwara ha nkọwa banyere atụmatụ nhazi na nkọwa nkwado nke ọrụ ndị ahụ.
Xi na Rahmon bịanyere aka na nkwupụta jikọrọ aka na ime ka mmekọrịta China-Tajikistan dịkwuo oke mmekọrịta, wee hụ mgbanwe nke ọtụtụ akwụkwọ nkwado mba abụọ.
Dabere na nkwupụta nkwonkwo ahụ, China na Tajikistan ga-aga n'ihu na-akwado ibe ha n'okwu metụtara ọdịmma ha, dị ka ọbụbụeze mba, nchekwa na ntụkwasị obi nke mpaghara, ma na-ebute mmepe nke mmekọrịta mba abụọ na amụma mba ofesi.
Akụkụ abụọ ahụ kwere nkwa na nkwupụta ahụ iji kwalite mmezi miri emi n'etiti Belt na Road Initiative na atụmatụ mmepe mba nke Tajikistan maka oge ahụ ruo 2030 iji wee wulite obodo mmepe obodo China-Tajikistan.
Nkwupụta ahụ na-ekwu na China na Tajikistan ga-akwalite mmekọrịta nchekwa iji wuo obodo China-Tajikistan nke nchekwa site na nkwụsị.
Akụkụ abụọ ahụ kwekwara nkwa na ha ga-aga n'ihu na-emekọwanye ọnụ na ọdịbendị, agụmakwụkwọ, sayensị, ahụike, egwuregwu na mpaghara ndị ọzọ yana ịgbasa mmekọrịta n'etiti ndị mgbasa ozi, ndị otu nka na ndị otu ntorobịa.
Ha ga-aga n'ihu iwusi nkwado na imekọ ihe ọnụ na United Nations, SCO, CICA na usoro ndị ọzọ dị iche iche, na ịgbanwee echiche na ịhazi ọnọdụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'okwu ndị bụ isi na mba na mpaghara iji jikọọ aka lebara nsogbu ụwa na mpaghara anya, dị ka Nkwupụta ahụ.
Ndị isi abụọ ahụ zutere akwụkwọ akụkọ ahụ. Tupu ha ekwuo okwu, Rahmon mere nnukwu nnabata nnabata maka Xi.
Xi rutere ebe a Fraịde maka nnọkọ nke ise CICA na nleta steeti na Tajikistan, nke bụ ụkwụ nke abụọ nke njem Xi na mba Central Asia abụọ. Ọ gara gara Kyrgyzstan maka nleta steeti na nzukọ 19th nke SCO.